Pyae Thitsar Aung Co.,LTD
Pyae Thit Sar Aung Co.,Ltd
SANFOVET VIETNAM အမေရိကန် နည်းပညာ၊ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် Vientam နိုင်ငံ SANFOVETမှ ထုတ်လုပ်သော ဆေးဝါးပစ္စည်းများ။
Colistin Sulfate Trimethoprim
ကြက်၊ ဘဲများနှင့် အခြားသော တိရစ္ဆာန်များ၊ အထူးသဖြင့် မွေးကင်းစ တိရစ္ဆာန်များ၊ ကြက်ပေါက်၊ ဘဲပေါက် များတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သော အူလမ်းကြောင်း နှင့်ဆိုင်သည့် Bactreia ရောဂါများအား ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
ကြက်၊ ဘဲ - ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 80kg လျှင် ဆေး 10mg နှုန်းဖြင့် ၃ ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ရန်။
(ဆေး 1g ကို 1Kg အလေးချိန်ရှိ ကြက်၊ ဘဲအကောင် ၈၀)
သောက်ရေ 400 Liter လျှင် ဆေး 200 g နှုန်းဖြင့် ဖျော်၍ ၃ ရက်မှ ၅ ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
ထုပ်ပိုးပုံ - 250 g ထုပ်
ကြက်၊ ဘဲများတွင် Mycoplasma ကြောင့်ဖြစ်သော အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ၊ နာတာရှည် အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ၊ အဆစ်အမြစ်ရောင် ရောဂါများ၊ လေပြွန်နှင့်ပတ်သက်သည့်ရောဂါများအား ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
မွေးကင်းစတိရစ္ဆာန်များနှင့် ကြက်ပေါက်၊ ဘဲပေါက်များတွင် အူရောင် ခြင်း၊ ၀မ်းလျှောခြင်း၊ ကြက်ချေးဖြူရောဂါ စသည့် ၀မ်းရောဂါများကို ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
၀မ်းရောဂါနှင့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါများ ရောထွေးဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
ကြက်၊ ဘဲ - ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 1 kg လျှင် ဆေး 20 mg နှုန်းဖြင့် ၃ ရက်မှ ၅ ရက် ဆက်တိုက်ရန်။ (ဆေး 100g ကို 1 Kg အလေးချိန်ရှိ ကြက်၊ ဘဲ အကောင် ၅၀၀ အား ၃ ရက်မှ ၅ ရက်ဆက်တိုက်ရန်) (သို့မဟုတ်) သောက်ရေ 100 Liter လျှင် ဆေး 100 g နှုန်းဖြင့်ဖျော်၍ ၃ ရက်မှ ၅ ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
Tylosin Tartrate 50%
ကြက်ကလေးများနှင့် ကြက်ဆင်များတွင် Mycoplasma ကြောင့်ဖြစ်သော နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ၊ အဆစ်အမြစ်ရောင် ရောဂါများ၊ လေပြွန်ရောင် ရောဂါများအား၊ အူရောင်ခြင်းနှင့် မျက်နှာရောင်ခြင်းများအား ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
ကြက် - ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 10 Kg လျှင် ဆေး 1 g နှုန်းဖြင့် ၃ ရက်မှ ၅ ရက် ဆက်တိုက်ပါ။ (ဆေး 1 g ကို 1 Kg အလေးချိန်ရှိ ကြက်၊ ဘဲ ၁၀ ကောင်အား ၃ ရက်မှ ၅ ရက် ဆက်တိုက်ပါ။) (သို့မဟုတ်) သောက်ရေ 200 Liter လျှင် ဆေး 100 g နှုန်းဖြင့်ဖျော်၍ ၃ ရက်မှ ၅ ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
AZ MOXY 50S
Amoxycillin Trihydrate 50%
ကြက်များတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သော အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ၊ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းရောဂါများ၊ ရောင်ရမ်းခြင်းများ၊ Virus ပိုးကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများ ၀င်ရောက်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ Bacteria ရောဂါများ ၀င်ရောက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
ကြက် - ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 25 Kg လျှင် ဆေး 1 g နှုန်းဖြင့် ၃ ရက်မှ ၅ ရက် ဆက်တိုက်ပါ။ (ဆေး 1 g ကို 1 Kg အလေးချိန်ရှိ ကြက်၊ ဘဲ ၂၅ ကောင်) (သို့မဟုတ်) သောက်ရေ 500 Liter လျှင် ဆေး 100 g နှုန်းဖြင့် ဖျော်၍ ၃ ရက်မှ ၅ ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
AZ DOXY 50S
ကြက်၊ ဘဲ၊ ဘဲငန်း၊ ကြက်ဆင်များတွင် Mycoplasma ကြောင့်ဖြစ်သော နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများ၊ မျက်နှာရောင်ရောဂါ၊ လေပြွန်ရောင်ရောဂါ၊ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါများအား ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
ကြက်၊ ဘဲ - ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 25 Kg လျှင် ဆေး 1 g နှုန်းဖြင့် ၃ ရက်မှ ၅ ရက် ဆက်တိုက်ပါ။ (ဆေး 1 g ကို 1 Kg အလေးချိန်ရှိ ကြက်၊ ဘဲ အကောင် ၂၀) (သို့မဟုတ်) သောက်ရေ 400 Liter လျှင် ဆေး 100 g နှုန်းဖြင့် ဖျော်၍ ၃ ရက်မှ ၅ ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
ထုပ်ပိုးပုံ - 500 g ထုပ်
Glucose, Vitamin K3, Vitamin C
ကျွဲ၊ နွားများနှင့် ကြက်၊ ဘဲများ ဖျားနာခြင်း၊ နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများ၊ အားနည်းခြင်း၊ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ခြင်း၊ ကပ်ပါးကောင်များ၊ ရာသီဥတုဒဏ်နှင့် အခြားသောဒဏ်များအား ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
ရာသီဥတုဒဏ်နှင့် အခြားသော ကူးစက်လွယ် ရောဂါပိုးများဒဏ်ကို ခန္ဓာကိုယ်မှ ခုခံနိုင်စွမ်း မြင့်တက်စေရန်။
ရောင်ရမ်းခြင်း၊ သွေးထွက်လွန်ခြင်း၊ ယားယံခြင်းနှင့် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ခြင်းများကို ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
မျိုးအောင်နှုန်းမြင့်မားစေခြင်း၊ ပေါက်နှုန်းကောင်းခြင်းနှင့် ဥခွံအရည်အသွေးကောင်းမွန်စေခြင်း။
သောက်ရေ 50 Liter လျှင် ဆေး 100 g နှုန်းဖြင့် ၅ ရက်မှ ၇ ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
UIyte Vit - C
Vitamin K3, Vitamin C, Vitamin B1
Vitamin B2, Pantothenic Acid
Nicotinamide, Sodium Chloride
ရာသီဥတုဒဏ်နှင့် အခြားသော ဖိစီးမှုဒဏ်များ၊ ရောဂါဒဏ်များ ခံစားရသည့်အတွက် အာဟာရဓာတ်များ ချိုတဲ့နေချိန်တွင် သုံးရန်။
ခန္ဓာကိုယ်မှ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုလွန်ကဲခြင်း (ဥပမာ-၀မ်းလျှောခြင်း၊ ချွေးထွက်များခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်း) ဖြစ်သည့်အချိန်တွင် သုံးရန်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ စိုထိုင်းဆများခြင်း၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊ ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့် ရရှိသော ဖိစီးမှုဒဏ်များကို ကာကွယ်ရန်
ကြက်၊ ဘဲ- သောက်ရေ 100 Liter လျှင် ဆေး 100 g နှုန်းဖြင့် ၃ ရက်မှ ၅ ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
အခြားတိရစ္ဆာန်များ - သောက်ရေ 100 Liter လျှင် ဆေး 50-100 g နှုန်းဖြင့် ဖျော်၍ ၃ ရက်မှ ၅ ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
ထုပ်ပိုးပုံ - 1 Kg ထုပ်
Oxytetracycline, Vitamin A,
Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3
မျိုးဥများနှင့် စားဥထုတ်သော ကြက်၊ ဘဲများတွင် အဓိကသုံးသည်။
ဥနှုန်းတိုးလာစေခြင်း၊ ဥ အရွယ်အစားကြီး၍ ဥခွံအရောင်လှပခြင်း၊ ဥသက်တမ်းရှည်ခြင်း၊ မျိုးအောင်နှုန်းမြင့်ခြင်း၊ ပေါက်နှုန်းမြင့်ခြင်း။
ရာသီဥတုဒဏ်နှင့် အခြားသောဒဏ်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း။
ထုတ်လုပ်မှု မထိခိုက်ဘဲ အစာစားနှုန်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း။
ကြက်၊ ဘဲ၊ ဘဲငန်းများတွင် ဥနှုန်းမြင့်မားစေရန် အကောင်းဆုံးဆေး။
ကြက်- သောက်ရေ 100 Liter လျှင် ဆေး 100 g နှုန်းဖြင့် ၃ ရက်မှ ၅ ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 500 Kg လျှင် ဆေးပမာဏ 100 g နှုန်းဖြင့် ၃ ရက်မှ ၅ ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
ဖျားနာနေချိန်နှင့် ဖိစီးမှုဒဏ်များ ခံစားနေရချိန်တွင် - သောက်ရေ 100 Liter လျှင် ဆေးပမာဏ 100 g နှုန်းဖြင့် ၅ ရက်မှ ၇ ရက် ဆက်တိုက်ပါ။ (သို့မဟုတ်) ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 300 Kg လျှင် ဆေးပမာဏ 100 g နှုန်းဖြင့် ၅ ရက်မှ ၇ ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
ခန္ဓာကိုယ်မှ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှု လွန်ကဲခြင်း (ဥပမာ - ဝမ်းလျှောခြင်း၊ချွေးထွက်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်း) များ ဖြစ်သည့်အချိန်တွင် သုံးရန်။
ကြီးထွားနှုန်း ရပ်တန့်နေခြင်း၊ အာဟာရဓာတ် မညီမျှခြင်း၊ အရိုးပျော့ခြင်း၊ ကြွက်သားအားနည်းခြင်း၊ Protein ချို့တဲ့မှုကြောင့် အချင်းချင်းဆိတ်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းခြင်းများကို ကာကွယ်ရန်။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲသည့်အချိန်၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသည့်အချိန်တွင် ခံစားရသောဒဏ်များကို ကာကွယ်ရန်။
ကြက်- သောက်ရေ 200 Liter လျှင် ဆေး 100 g နှုန်းဖြင့် ၃ရက်မှ ၅ရက်ဆက်တိုက်ပါ။
နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ မြင်း - သောက်ရေ 10 Liter လျှင် ဆေး 100 g နှုန်းဖြင့် ၃ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
Povidone Iodine , Solvent, Glycerin q.s.f
တိရစ္ဆာန်များ၏ ခြံတွင် ‌ရေ 100- 250 Liter လျှင် ဆေး 1 Liter နှုန်းဖြင့် ကြမ်းခင်း၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့် ခြံပတ်ဝန်းကျင်ကို တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်မှ နှစ်ကြိမ် ၂ပတ်၊ ၃ပတ် ဆက်တိုက်ဖျန်းရန်။
ထုပ်ပိုးပုံ - 1 Liter ဘူး
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1,
Vitamin B2, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B12,
Vitamin PP, L-Lysine, DI - Methionine, Cholin, Sorbitol
အစာထဲတွင် အာဟာရဓာတ် မညီမျှခြင်း၊ ခြံအတွင်း အလင်းရောင်ဝင်နှုန်း ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်ညံ့ဖျင်းခြင်းများကို မြှင့်တင်ရန်။
ရာသီဥတုဒဏ်နှင့် ရောဂါပိုးများ ဝင်ရောက်ခြင်းဒဏ်မှ ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
ကြက်၊ ဘဲ၊ နွားငယ်လေး နို့စားနွား၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ မြင်းများ မီးလွတ်ချိန်၊ သားခွဲချိန်တွင် အရွယ်ညီမျှမှုရှိစေခြင်း၊ အစာချေဖျက်နှုန်း ကောင်းစေခြင်း၊ အမွေးပေါက်နှုန်းကောင်း၍ အမွေးအရောင်လှပစေခြင်းများကို မြှင့်တင်ပေးရန်။
ပဋိဇီဝဆေးများ၊ ကာကွယ်ဆေးများ တိုက်ပြီးချိန်တွင် တိုက်ကျွေးရန်။
ကြက်- သောက်ရေ 200 Liter လျှင် ဆေး 50- 100 ml နှုန်းဖြင့် ၄ရက်မှ ၈ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
နွား၊ သိုး ဆိတ်၊ မြင်း- သောက်ရေ 100 Liter လျှင် ဆေး 100 ml နှုန်းဖြင့် ၃ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
သောက်ရေထဲတွင် ဖျော်ထားသော ဆေးကို ၁၂ နာရီအတွင်းတွင် ကုန်အောင်တိုက်ရန်။
ထုပ်ပိုးပုံ - 1 Litre ဘူး
Mycoplasma နှင့် E- coli ကြောင့်ဖြစ်သော Bacteria ရောဂါများကို ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများနှင့် အူလမ်းကြောင်း ရောဂါများရောထွေးဖြစ်ပွားချိန်တွင် ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 10 Kg ရှိတိုင်း ဆေး 1 ml နှုန်းဖြင့် ၃ရက်မှ ၅ရက်ဆက်တိုက်ပါ။ (သို့မဟုတ်) သောက်‌ရေ2Liter လျှင် ဆေး 1 ml နှုန်းဖြင့် ၃ရက်မှ ၅ရက်ဆက်တိုက်ပါ။
Colibacillosis (သို့) Salmonellosis ရောဂါများကို ကုသရန် ၅ရက်မှ ၇ရက် ဆက်တိုက်ပါ။ လိုအပ်ပါက ဆေးတိုက်ပြီး ၅ရက်အကြာတွင် ထပ်မံတိုက်ရန်။
ကျွဲ၊ နွား၊ မြင်း-အူလမ်းကြောင်းရှိ သံလုံးကောင်များ၊ အဆုတ်သံကောင်များ၊ မျက်လုံးသန်ကောင်၊ အရေပြားရှိ ကပ်ပါးကောင်များ၊ ဝဲရောဂါများတွင် သုံးရန်။
ဝက် - အူလမ်းကြောင်းရှိ သံကောင်များ၊ အဆုတ်သံကောင်များ၊ အရေပြားရှိ ဝဲရောဂါများတွင် သုံးရန်။
ခွေး၊ ကြောင်-သံလုံးကောင်များ၊ သန်းများ၊ ဝဲရောဂါများတွင် သုံးရန်။
အရေပြားအောက်သို့ ထိုးရန် (S/C)
နွား၊ မြင်း- ခန္တာကိုယ်အလေးချိန် 50 Kg ရှိတိုင်း ဆေး 1 ml နှုန်း။
ဝက်- ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 33 Kg ရှိတိုင်း ဆေး 1 ml နှုန်း။
သိုး၊ ဆိတ်-ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 25 Kg ရှိတိုင်း ဆေး 0.5 ml နှုန်း။
ခွေး၊ ကြောင်-ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 20 Kg ရှိတိုင်း ဆေး 0.5 ml နှုန်း။
ထုပ်ပိုးပုံ - 50 ml ပုလင်း
ORT, Mycoplasma spp. (CRD), Pasteurella multocida, Haemophilus spp. (Coryza), Salmonella s.p. (Typhus avium) Clostridium spp. အစရှိသည့် Bacteria များကြောင့်ဖြစ်သော အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ ရောဂါများကို ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
ကြက် - ခန္တာကိုယ်အလေးချိန် 1 Kg ရှိတိုင်း ဆေး 10 mg နှုန်းဖြင့် ၃ရက်မှ ၅ရက်ဆက်တိုက်ပါ။ (သောက်ရေ5Liter လျှင် ဆေး 1 ml နှုန်းဖြင့်) ၃ရက်မှ ၅ရက် ဆက်တိုက်ပါ။
ကြက်ကလေးအုပ်စုများတွင် Mycoplasma Gallisepticum ကြောင့် ဖြစ်သော နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများ ဖြစ်လျှင် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 16 Kg လျှင် ဆေး 1 ml နှုန်းဖြင့် ၅ရက် ဆက်တိုက်ပါ။ (ဆေး 1 ml လျှင် 1 Kg အလေးချိန်ရှိ ကြက် ၁၆ ကောင်အား တိုက်ကျွေးရန်)
Copyright © 2021. All right reserved. Crafted by Creatigon